7 Off The Beaten Path Izindawo eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Off The Beaten Path Izindawo eYurophu
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izikhangibavakashi Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 14/05/2021)
Ukuhamba nokuthola izindawo ezintsha kusinika amaphiko okuphupha, funga, futhi ufunde. Emhlabeni omkhulu kangaka, cishe akunakwenzeka ukubona konke, futhi akunakwenzeka ukuzwa futhi ujabulele yonke indawo eYurophu. Nezindawo eziningi ezijabulisayo, ungaphupha ukubathola bonke. Uma ubheka ngempela ukujabulela njengendawo futhi uvulele imizila emisha, khona-ke sinayo 7 okungafani nezindlela zokushayela ongazithola.
Ukusuka eFrance kuya eSwitzerland, 7 amabala wemvelo yasendle, amachibi okuthula, nezinqaba ezijabulisayo zilinde ukuba yingxenye ye-albhamu yezithombe zakho zamaholide angalibaleki eYurophu. Ngakho, pakisha ukukhanya futhi ulungele ukuphatha izinkumbulo kanye nezindaba kuphela nawe, njengoba uqala i-adventure entsha, futhi uhambe izindlela ezingahambanga kancane.
1. Off The Beaten Path Izindawo: Isisebenzi, France
Iqondaniswe noLwandle iMedithera kanye neziqongo zePyrenees, isifunda saseSouthern Occitanie eFrance siyamangaza. Ikhaya ekhaya ledolobha eliphakathi, Toulouse omuhle, amabhishi, newayini, lesi sifunda saseFrance siyathakazelisa futhi simangalisa lapho kushaywa khona indlela eYurophu ukubeka phezulu ohlwini lwakho lwamabhakede.
I-Occitanie ihluke ngokuphelele kwi-French Riviera naseParis, ngenxa ijubane layo elihamba kancane neliphupho. Ngakho, ungathatha isikhathi sakho ukuhlola i-Cathar Country nezinqaba zayo, kufaka phakathi i-Carcassonne ehehayo. Uma uthanda imisebenzi yangaphandle njengokuhamba ngezinyawo noma i-rafting, khona-ke iGorges du Tarn canyon neCevennes National Park zilungile. I esiqiwini isitolo se-UNESCO biosphere reservation, nelinye lamapaki ezizwe ayishumi eFrance.
Ungenza isisekelo sakho enhlokodolobha yesifunda ebomvana nenhle, Toulouse, noma idolobha elihle lase-Albi. Kokubili kuyamangalisa ukuphuma kwendlela eshayiwe ukugqekeza kwedolobha eFrance ne-adventure ende futhi Iholide laseFrance. Ungafinyelela iToulouse kalula futhi kahle ngokuhamba ngesitimela kusuka eParis naseBarcelona cishe 5 amahora.
ILyon ukuze iToulouse ngeSitimela
I-Paris to Toulouse ngeSitimela
Kuhle kuToulouse ngesitimela
Bordeaux ukuze Toulouse ngu Isitimela
Idolobhana laseHallstatt liyidolobhana elinomfanekiso omuhle eliseLake Hallstatt. Entwasahlobo, iwe, noma ubusika, liyipharadesi eliphelele kunoma yisiphi isikhathi sonyaka, ukunikela ngemisebenzi eminingi yangaphandle yabahambi abanentshiseko yokuthanda. Noma kunalokho, uma uphupha ukuthi kuzolile echibini ngeNgilazi yewayini noma ekuhambeni ngesikebhe azungeze ichibi, IHallstatt yindawo efanelekayo.
Lokhu indawo enhle sikwenze kwaba okwethu 7 off the abashaywayo indlela eya eYurophu uhlu sibonga emihumeni enamandla, i-crystal blue lake, nesiGodi sase-Echern naso ukubukwa emangalisa nemizila. Ungasayiphathi, ukuthi isatholakala emhlabeni wonke.
IHallstatt iyi 3 amahora kude neVienna ngokuhamba ngesitimela. Ngakho-ke, uma ufuna iholidi elingalibaleki ezimeni ezinempilo zase-Austria, futhi okubaluleke kakhulu kude nezixuku, ke Hallstatt iyona ephelele off the washaywa indlela uya khona.
UMunich ukuya eHallstatt ngesitimela
Innsbruck to Hallstatt by Isitimela
Passau to Hallstatt ngeSitimela
Rosenheim to Hallstatt ngeSitimela
3. Off The Beaten Path Izindawo: Haarlem, Abase Netherlands
Okuncane okwaziwa ukwedlula omakhelwane bawo i-Amsterdam neRotterdam, IHaarlem ihamba phambili edolobheni elishaywayo eNetherlands. kuphela 18 imizuzu kude ne-Amsterdam ngesitimela, I-Haarlem's charm izokungenisa okungenani impelasonto ende.
Ifa labephakathi kwedolobha, umphefumulo ophilayo kanye nomoya, Dala umkhathi omangalisayo. Uma ufisa ukuzwa iHolland njengaseDashi langempela, bese uhamba imigwaqo yawo emincane, kuze kufike kuGrote Markt. Khona-ke, gibela isivunguvungu somoya, Ummbila wase-Adriaan, ngokubukwa okumangazayo komuzi nomfula.
Another great way to spend your vacation in Haarlem is to visit the oldest breweries. Buyela phakathi 1620, Lapho 100 abafuyi bezokwelapha, futhi namuhla usengakwazi ukunambitha ezinye izindlela ezindala. Kungcono, ngemuva kokuvakashela enye yeminyuziyamu eminingi edolobheni, futhi kukhona iminyuziyamu engaphezulu eHaarlem kunanoma yiliphi elinye idolobha laseDashi.
ukuze uphethe, lokhu kuvaliwe edolobheni elishaywayo igugu elifihlekile eYurophu amazwe athande kakhulu futhi kukufanele ngokuphelele ukuvakashelwa!
4. Ichibi i-Orta, Italy
Abavakashi abaningi baya e-Italy ukunambitha cuisine Italian futhi ujabulele ukuzinikela okuncane kwempilo, njengoba kwenza abantu bendawo. Nokho, kunokuningi e-Italy kunokuxebula i-a ingilazi yewayini nge-pasta eyenziwe muva nje. ILake Orta esifundeni samachibi liyindawo enhle futhi enothando. Ucashile phakathi kwezintaba, futhi ihlukaniswe eLake Maggiore edumile nguMonte Mottarone, ILake Orta likufanele ukudunyiswa kwakho okuphelele, nesikhathi sokuzwa i-Italiya ithrekhi eshayiwe kanye nejubane lokuthula.
Kusukela izintaba, isikebhe ugibele, iwayini ngasechibini, nokubhukuda, ILake Orta liyigugu elimangalisayo lase-Italy, esesitholwe izivakashi.
ILake Orta uhambo olude lwamahora amabili ukusuka eMilan, futhi 5 amahora ukusuka eZurich ngokubuka okuhle kwe-Alps.
IGenoa ukuya eMilan ngesitimela
Rome eMilan ngo zemininingwane
Bologna to Milan ngesitimela
UFlorence kuya eMilan ngesitimela
5. Off The Beaten Path Izindawo: Bohemia, I-Czech Republic
Kusele amahora ambalwa ukusuka kokuqhaqhazela nokuphithizela kwePrague, izwe lezinganekwane nezindawo ezinhle zomhlaba zilindelwe. Ipaki yezwe lonke laseBohemian Switzerland, I-Czech Svycarsko National Park, isemngceleni neGermany. Pravcicka Brana, ukwakheka kwamatshe okumangazayo, iziqu zamanzi, nemizila eminingi yokuhamba ngezinyawo, uhambo olufushane lwesitimela kude noDecin, idolobha eliseduze kakhulu.
Enye indawo ebekiwe enhle ngaphandle emangalisa yiKladska Isiqiwi semvelo. There’s a beautiful trail to the lake, futhi kuyamangaza kakhulu ekwindla. kodwa, uma uthanda amadolobha amancane ne-chateaux, khona-ke uzokuthanda i-neo-Gothic IHluboka Chateau.
Ebhayisekili noma ezinyaweni, I-Antwerp iyajabulisa futhi iyabonakala. Idolobha lesibili ngobukhulu eBelgium, I-Antwerp ayinakwa kakhulu yizivakashi. Nokho, kuyinto emangalisayo off the washaywa indlela ukuphela eYurophu for a fun ngempelasonto uthole.
Idolobha lihlukaniswe phakathi 3 izindawo: edolobheni elidala, ENingizimu, nezibuko, okuyikhaya elinamasiko ahlukahlukene nabantu abavela emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, yizulu eliphakeme, ukhonza noma yini inhliziyo yakho efisayo. Iminyuziyamu, Imakethe enkulu, amasonto, abaklami bemfashini abaphezulu be-notch, kusele ihora nje ukusuka enhlokodolobha, ngesitimela.
Ngakho, uma ufisa idayimane lakho uqobo kusuka esikhungweni sokuhweba sedayimane esimatasa kakhulu, thanda ushokoledi, futhi uyothenga, lokhu okufanele ufike kukho lapho uthathwa khona.
IBrussels eya e-Antwerp ngesitimela
I-Amsterdam eya e-Antwerp ngesitimela
Lille ukuya e-Antwerp ngesitimela
I-Paris eya e-Antwerp ngesitimela
7. Off The Beaten Path Izindawo: Lucerne, Switzerland
Izilungiselelo ezihle kakhulu zokwehla kwezothando eSwitzerland, Lucerne muhle kakhulu. Ukuhamba echibini, ukubuka iziqongo zeqhwa zeNtaba i-Pilatus neNtaba i-Titlis kubonakale emanzini, ngaphandle kwezivakashi ezizungezile, iphupho laseSwitzerland.
Lovely Lucerne isizinda esikhulu se usuku uhambo nasezintabeni ze-Alps, futhi isatholwa abahambi. Ngakho-ke uzothola ithuba eliyigugu lokukujabulela futhi uhlole iSwitzerland endleleni eshaywayo. Hamba indlela ye-Dragon futhi uvivinye amandla akho epaki yezintambo, okuyimisebenzi emihle kakhulu yangaphandle ezungeze uLucerne.
Itholakala ezansi kwe-Alps emngceleni weSwitzerland-Germany, ILucerne ayinakulibaleka lapho ishiye indlela eya e-Europe. I-Lucerne iyigugu elifihlekile enkabeni yeSwitzerland futhi iyi-juhamba ngehora ngesitimela esivela esikhumulweni sezindiza saseSwitzerland.
IZurich eya eLucerne ngeSitimela
UBern kuLucerne ngeSitimela
IGeneva kuLucerne ngeSitimela
UKonstanz kuLucerne ngeSitimela
ukuze uphethe, I-Europe igcwele izimanga, izinganekwane, izimfihlo, nemvelo engafundwe izivakashi. Uma ufisa isipiliyoni esingajwayelekile futhi uzizwe emazweni amakhulu kakhulu eYurophu. Nokho, uma ufisa ukuhamba, njengoba kwenza abantu bendawo, khona-ke usesikhathini esimangazayo kunoma iyiphi indawo ekushiwo ngenhla.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza ekutholeni amathikithi ashibhile wesitimela kunoma iyiphi indawo ekhethekile ohlwini lwethu.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwethu kwebhulogi elithi “7 Off the Beaten Path Destination in Europe” kwisayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Foff-beaten-path-destinations-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila yethu ethandwa kakhulu yezitimela - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / de ukuba / fr noma / es kanye ngezilimi ezingaphezu.
Antwerp citybreakeurope offbeatenpath offthebeatenpath Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi umagazine nbangibhabhi travelitaly travelswitzerland